Fonosana fantsom-bozaka mahitsizoro re ...
Factory vidiny mivantana 30mm ...
Boiler firaka firaka firaka ste ...
Mangatsiaka avo lenta voasintona p ...
Karbonina mihodina mihodina mafana ...
Ny fantsom-by vy tsy misy vanja (fantsom-pirinty) dia vy vy lava misy fizarana poakaty ary tsy misy fefy manodidina azy.
Tavoahangy vita amin'ny vy mangatsiaka avo lenta
Fampiharana: ampiasaina amin'ny famokarana rafitra mekanika, fitaovana hydraulic, faritra misy fiara, tanany vy.
Fantsona fantsom-boalavo mahery: 15 crmog, 12 cr2mog, 12 cr1movg, 12 cr2mowvtib, 10 cr9mo1vnb, SA210A1, SA210C, SA213 T11, SA213 T12, SA213 T22, SA213 T23, SA213 T91, SA213 T92, ST45.8 / Ⅲ 13 crmo44, 10, 15 mo3, crmo910.
Lisitry ny fananganana vy vita amin'ny vy mihodina mafana
Ny takelaka vy amin'ny hafanana ambony dia manana tanjaka avo lenta (b≥440MPa) sy fanoherana ny oksiôida, ary misy fanoherana azo antoka ny harafesin'ny hidrogen.
Ny takelaka vy tsy misy fangarony dia madio, manana plastika avo, henjana ary tanjaka mekanika, asidra, gazy alkaly, vahaolana ary harafesin'ny haino aman-jery hafa.Izany dia karazana vy tsy mora harafesina, saingy tsy afaka amin'ny harafesina tanteraka.
Ny takelaka vy vita amin'ny laminated laminated laminated-resisting plate dia vokatra lovia iray izay ampiasaina manokana amin'ny toetr'andro anaovana faritra midadasika, ary vita amin'ny alàlan'ny fisidinana ambonin'ilay vy misy karbaona ambany na vy kely misy alikaola miaraka amin'ny fahamendrehana sy ny plastika ary ny fitambarana amin'ny sosona fanoherana fanoherana ny hateviny sasany amin'ny hamafin'ny hafanana sy ny fanoherana tsara.
Ireo mpamboly voninkazo vy Corten dia mpamboly vy lehibe ho an'ny ety ivelany dia vita amin'ny vy vy, izay azo ampiasaina hambolena karazam-boninkazo samihafa. Corten Steel Planter dia noforonina tamin'ny fomba tsotra nefa azo ampiharina, izay malaza any Aostralia sy any amin'ny firenena eropeana. Ankoatr'izay, ny fanoherana ny harafesiny tena tsara dia mahazaka andrana, tsy mila miahiahy momba ny fanadiovana ny olona sy ny androm-piainany ny olona.
Azontsika atao ny manao famolavolana vaovao ho toy ny hevitrao tsara na sary, manome sary CAD maimaim-poana.
Ho an'ity rindrin'ny kanto metaly ity dia matetika izahay no mampiasa vy vy fanoherana ny harafesina toy ny akora, mifototra amin'ny lamina izay tadiavin'ny mpanjifa, dia hataontsika amin'ny fanapahana lacer, avy eo welding sy fandavahana, ary amboarintsika azy miaraka amin'ny fitaovana efa niorina.